Perikopa (Mg)| Page 26
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-VII man.Trinite Herinandro 11-16 Jolay 2016 “Andriamanitra miahy ny aina” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miahy ny aina araka ny voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy an’ny maty, fa an’ny velona” Mat.22:32b. Koa dia ho amin’ny fiainana no itaomany antsika hitady azy, dia isika izay maty tao amin’ny fahotana ka tafasaraka taminy. … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady faha-VI man.Trinite Herinandro 04-09 Jolay 2016
3 juillet 2016 by mpiandraikitra	Leave a Comment
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-VI man.Trinite Herinandro 04-09 Jolay 2016 ”Miray antoka amin’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra: Toy ny fanjakana rehetra dia manana ny didiny koa ny fanjakan’Andriamanitra izay mampiray antoka izay rehetra monina ao. Fitiavana no fototra iorenany sady antom-pisiany, fa Andriamanitra Tompon’ny fanjakany dia fitiavana (1 Jao.4:16), ary ”ny fitiavana no fahatanterahana ny … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady faha-V man.Trinite Herinandro 27-02 Jolay 2016
28 juin 2016 by mpiandraikitra	Leave a Comment
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-V man.Trinite Herinandro 27-02 Jolay 2016 ”Tompo Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Tompo Andriamanitra” dia midika mdika fa Izy no Tompo ary tsy misy hafa. Izay no hevitry ny hilazany ny anarany ho ”Jehovah” ka hitenenany hoe ”Izaho dia Izaho ihany no Jehovah Ary tsy misy Mpamonjy afa-tsy … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady faha-IV man.Trinite Herinandro 20-25 Jona 2016
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-IV man.Trinite Herinandro 20-25 Jona 2016 « Ny fanatitra ankasitrahana » * Fitarihan-kevitra: Ny fanatitra ankasitrahan’Andriamanitra dia izay miasa hahatonga famonjena ny olona. Nahafoy hatramin’ny ainy Jesosy mba hamonjy ny mpanota ho afaka amin’ny fatoran’ny ota sy ny fanangolen’ny devoly. Ary dia voalaza fa nankasitrahan’ny Ray Izy ka nasandrany ho … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady faha-III man.Trinite : Herinandro 13-18 Jona 2016
FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-III man.Trinite Herinandro 13-18 Jona 2016 ”Ny famindrampo mamela heloka” Fitarihan-kevitra: Satria tsy vitan’ny mpanota ny hanavotra ny tenany, araka ny tenin’i Paoly Apostoly manao hoe: ”Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24, dia maninjitra ny sandriny ny Tompo hisintona azy ho afaka amin’ny vahohon’ny … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite : Herinandro 06-11 Jona 2016
5 juin 2016 by mpiandraikitra	Leave a Comment
TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 06-11 Jona 2016 “Ny fanasam-pitiavana” Fitarihan-kevitra: Fanasam-pitiavana ny fanasana izay iantsoan’Andriamaitra ny olona rehetra. Fa tia mizara Izy mba hahavelona ny olona ary mikendry ny hanandratra ny olona izay asainy hiditra ao amin’ny fanjakany be voninahitra sy maharitra mandrakizay. Sambatra ny … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite : Herinandro 30 Mey – 04 Jona 2016
TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 30 Mey – 04 Jona 2016 ”Mahalalà an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra : Tsy miafina amintsika Andriamanitra fa manao izay ahafantarantsika Azy. Izany dia amin’ny alalan’ny Soratra Masina izay nampanoratiny tamin’ny alalan’ny tsindrimandrin’ny Fanahy Masina (2 Tim.3:16). Ary dia ny Fanahy Masina rahateo … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Andro Pentekosta Alahady I & II : Herinandro 16-21 Mey 2016
TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Andro Pentekosta Alahady I & II Herinandro 16-21 Mey 2016 ”Raiso ny Fanahy Masina” * Fitarihan-kevitra: Ny fanomezan’Andriamanitra ny Fanahy Masina dia endriky ny fitiavany izay miahy ny olony. Izany dia toa an’i Jesosy izay niteny nanao hoe: ”Izaho no Mpiandry Tsara, ny Mpiandry Tsara manolotra ny … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska : Herinandro 09-14 Mey 2016
TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 09-14 Mey 2016 « Ny Fanahy Masina tonga amintsika » * Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina tonga amintsika, dia satria Andriamanitra tsy mahafoy ny olony. Hoy i Jesosy raha nampionona ny mpianany: ”Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankatỳ aminareo Aho” Jao.14:18. … [Read more…]
Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska : Herinandro 02-07 Mey 2016
TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 02-07 Mey 2016 « Ny herin’ny Vavaka » Fitarihan-kevitra: Isan’ny toetra nahafantarana ireo mpaminany sy olon’Andriamanitra ny herin’ny Vavaka ataony. Anisan’izany i Elia araka ny voasoratra hoe : “Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny … [Read more…]
« Précédent 1 2 3 4 5 … 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Suivant »